नवराज-शुष्मा प्रकरण : नवराजकी प्रेमीका शुष्माले पहिलोपटक मुख खोलीन् [भिडियोसहित] – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/नवराज-शुष्मा प्रकरण : नवराजकी प्रेमीका शुष्माले पहिलोपटक मुख खोलीन् [भिडियोसहित]
2,9995minutes read
काठमाडौं । अहिले राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको नवराज–शुष्मा प्रकरण गम्भीर मोडमा पुगेको छ । पश्चिम रुकुम चौरजहारीमा अन्तरजातीय प्रेम विवाहको निहुँमा सामुहिक सुनियोजित ढंगबाट गरिएको न’रसंहा’रमा अहिलेसम्म ५ जनाको लाश फेला परेको छ । दुलही लिन गएका १९ जनामध्य ६ जना हराइरहेका थिए । एकजना अझै पनि भेटिएका छैनन् ।
अहिले खोजिकार्य जारी रहेको छ । घटना भएको भोलीपल्ट ओझेलका खबर का सञ्चालक प्रेम सुनारले शुष्मा लगायत उनका बाबु बीर बहादुर मल्ल र आमा प्रकाशी मल्लसँग कुरा गरेको अडियो अहिले बाहिर आएको छ । यो टेलीफोन संवादमा शुष्मा मल्ल ठकुरीले फेसबुकबाट प्रेम बसेको तर पछि केटा मन नपरेको बताएकी छिन् । उनका आमाबाबुले पनि केटा विहे गर्ने उदेश्य भन्दा केही फरक उदेश्यका साथ आएको बताए । शुष्माले आफु नवराजको घर गएको कुरा पनि बताएकी छिन् ।
उनको बयानलाई आधार मान्ने हो भने उनीहरु प्रेम सम्बन्धमा थिए । कुराकानीका अनुसार शुष्माले नवराजलाई छोड्नि, तर नवराजले छोड्न सकेनन् । उनका अनुसार नवराजले पछि उनीसँग जबरज’स्ती विहे गर्न पनि खोजेका थिए । शुष्मा अहिले एसईई दिन तयार भएर बसेकी १७ वर्षीया किशोरी हुन् । अर्को तिर नवराज विक पनि नेपाल प्रहरीमा नाम निकालेर बसेका थिए, उनको उमेर २१ वर्षको भएको बताइएको छ । युवत्तीले आफुहरु लामो समयदेखि सम्पर्कमा नरहेको पनि जानकारी दिइन् ।
नवराजका साथिले शुष्मासँग कुरा भएपछि नवराज आफैंले दुलही राजी भइ लिन जाउँ भनेर सुनाएका थिए भनेर भनेका छन् । तर शुष्मा यी कुराहरु मान्न तयार छैनिन् । शुष्माका बुवाले त नवराजले आफुहरुलाई सिध्याउन खोजेको पनि आरोप लगाएका छन् । शुष्मा गएको फागुन महिनामा नवराजको घरमा गएकी थिइन् । नवराजसहित युवाहरुको समुह जाँदा भएको यो घटना गत शनिबार भएको थियो । उनकी आमाले नवराज पटक-पटक गरेर तीन पटक आफ्नो गाउँमा आएको बताइन् ।
अस्ति घटना भएको समयमा आफुले १९ जनालाई एकसाथ देखेपछि लकडाउनको बेला किन आएको भन्दै झपारेको कुरा शुष्माकी आमाले स्विकार गरिन् । नवराजको समुहलाई देखेपछि आफुले हल्ला गरेको पनि उनले जानकारी दिइन् । हल्ला गरेपछि बेलुका त्यो पनि लकडाउनको बेला भएको हुँदा छिमेकीहरु के भयो भन्दै बाहिर आएका थिए । त्यसपछि ति केटाहरु जुन बाटो आएका थिए त्यही बाटो फिर्ता भएका थिए
त्यसपछि उनले आफ्ना श्रीमानलाई, ‘बुढा अस्ति आएको केटा फेरि आएछ, १७, १८ जना साथमा लिएर आएको रहेछ’ भनेर सुनाइन् । त्यसको जवाफमा उनका श्रीमान बीर बहादुर मल्लले उनीहरु कता जान्छन् ? के गर्छन ? हेर्नु भनेर जवाफ फर्काएका थिए । उनले आफ्ना श्रीमानलाई प्रहरीलाई खबर गरेर पक्राउ गर्न लगाउँ भनिन् तर त्यसको जवाफमा पनि उनका श्रीमानले केही नगर कहाँ जान्छन ? के गर्छन ? हेर भनेर जवाफ फर्काएको कुरा उनले सुनाएकी छिन् ।
त्यसको केही समयपछि चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीका वडाध्यक्ष डम्बर मल्लसहित उनका श्रीमान आएका थिए । त्यसपछि गाउँलेहरुले नवराजसहितको टोलीलाई समातेर प्रहरीको जिम्मा लगाउँने भनेर ओर्लिएका थिए । त्यसपछि उनीहरु डराएर भेरीमा हाम फालेको हुनसक्ने उनको अनुमान रहेको छ । आमासँग यति कुरा भएपछि सञ्चारकर्मी सुनारले शुष्मा मल्लसँग कुरा गर्न खोजेका छन् । त्यसपछि शुष्मासँग गरेको कुराकानी जस्ताको तस्तै यहाँ राख्दैछौः
प्रेम सुनारः हजुर बहिनी, खास चाँही त्यो केटासँग पहिले देखि नै चिनजान भा थ्यो रे, तपाँईको
शुष्माः अँ, पहिल्लै भाथ्यो चिनजान
प्रेम सुनारः अहँ
शुष्माः त्यसपछि बीचमा चाँही ग्याप भएर छोडेको मैले
प्रेम सुनारः कति भयो ? उ सँग चिनजान भएको
शुष्माः ए उ सँग चिनजान भाको
प्रेम सुनारः उम
शुष्माः फागुनको महिनामा भाको
प्रेम सुनारः भेटघाट पनि भैसक्या थ्यो ? तपाँईहरुको पहिल्लै
शुष्माः अँ ह्वाँ केरे उस्को घरमा गाथे म मेलापछि
शुष्माः उस्को घरमा गए अनी भोलीपल्ट आइहाले
प्रेम सुनारः अनी के भन्थ्यो, विवाह गर्ने भन्ने कुरा भाथ्यो ?
शुष्माः नाँई केही भाथेन विवाह गर्ने भन्ने कुरा
प्रेम सुनारः त्यो दिन त ब्या गर्ने भनेर आथ्यो रेन्त त्यो मान्छे त
शुष्माः कहिले हिजो ?
शुष्माः हिजो खैं, म त घर भित्र टिभी हेर्दै थिए । हल्लाखल्ला भएपछि म बाहिर निस्के, साँझपट्टी
प्रेम सुनारः उल्ले के भन्थो तपाँईलाई फोन गर्या थिएन ?
शुष्माः नाँई म सँग फोनै हुँदैन म सँग त
प्रेम सुनारः फोन छैन र तपाँईको
शुष्माः मेरो फोन छ तर म उ सँग फोन नै गर्दैन्थे
प्रेम सुनारः फेसबुकमा चिनजान त, पहिले फेसबुकबाट चिनजान भाको रे होईन ?
शुष्माः उम, हजुर पहिले फेसबुकदेखि चिनजान भाको, त्यसपछि मलाई चित्त नै बुझेन् । अनी त्यसपछि मैले छोड्दे । अनी मलाई उस्ले पटकपटक मा र्ने धम्की दियो ।
शुष्माः अनी त्यसपछि मैले सीम भाँचेर फाले, मोबाइल पनि फोड्दिँए ।
शुष्माः त्यसपछि साथिहरुलाई के भन्दो रहेछ, लकडाउन खुलेपछि १, २ सय जना युवाहरु लगेर त्यसलाई झ्यातेर ल्याउँछु भनेछ
शुष्माः अनी मलाई डर लाग्यो । अनी अब ममी एले यस्तो–यस्तो भन्छ गरे, अनी अस्ति पनि आको बेला हामीले यहाँ जिप्रकामा उस्लाई पेश गर्द्या हौं ।
शुष्माः अनी यहाँ जिप्रकामा आएर के गर्थ्यो खैं, फेरि जिप्रकाले छोड्देछ । अनी फेरि हेर्नु हिजो आयो । मलाई त केही थाहा छैन ।
प्रेम सुनारः तपाँई कतिमा पढ्नुहुन्छ ?
शुष्माः ए, अहिले म एसईई हो ।
प्रेम सुनारः हजुर
शुष्माः एसईई दिने हो मान्छे, एसईई दिने
प्रेम सुनारः अनी यस्तो कलिलो उमेरमै माया प्रेममा फस्नु भयो त ?
शुष्माः अनी पहिले जे भयो त्यसका लागि सरी, अनी त्यसपछि सरी त भनिराछु नि मैले । त्यसपछि मैले उस्लाई धेरै सम्झाया हुँ । अब तँ आफ्नो लाइनमा हिड, म आफ्नो लाइनमा हिड्छु । तँ आफ्नो लाइफ बना, म मेरो लाइफ बनाउँछु भनेर धेरै सम्झाया हुँ तैपनी मान्दै नमानेर यति धेरै आन्दोलन गर्दियो ।
प्रेम सुनारः अनी त्यही त नि त्यो, फागुन महिनामा, फागुनदेखि कतिपटक, कहाँ–कहाँ भेट भयो तपाँईहरुको
शुष्माः भेट भएन, अनी फेसबुकतिर चिनजान भयो । मैले मेरो साथिको बर्थडे विस गर्द्या थे ।
शुष्माः साथिको घरमो माथ्तिरको मान्छे रहेछ क्या त्यो ।
शुष्माः कामना शाहको बर्थडे विस गर्द्या थे मैले
शुष्मासँग यति मात्रै कुरा गरिएको छ । शुष्माका बुवाले केटाहरु यो पटक किन आएका थिए भन्ने कुरा आफुलाई भन्दा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका केटाहरुले राम्रो भन्न सक्छन् भनेर पन्छिएका छन् । ति केटाहरुका अनुसार उनीहरु दुलही ल्याउनका लागि गएका थिए । उनले कतिजना युवाहरुको समुह आएको थियो भनेर भन्न सक्ने अवस्था नरहेको पनि बताएका छन् । अहिले बाहिर आएको जानकारी अनुसार सुरुमा २१ जना थिए तर बीचमा दुई जना अगल भएपछि १९ जना केटीको गाउँमा पुगेका थिए ।
शुष्माका बुवाले यो भन्दा पहिले पनि पटकपटक आएको र प्रहरीकहाँ बुझाएको कुरा स्विकार गरेका छन् । उनले शंका गर्दै भने, ‘रातको बीचमा आउँथे भने सायद हामीलाई मा रेर भाग्थे होला ।’ उनले केटाहरु ६ बजे आसपास गाउँमा आएको बताएका छन् । उनले अर्को के कुरा बताए भने लकडाउनका कारण गाउँमा नयाँ मान्छे आउँन नदिने भन्दै गाउँलेहरुले लखेटेको जानकारी दिएका छन् । तर आफुसँगै नगएको पनि खुलासा गरेका छन् । उनले कुराकानी गर्ने क्रममा एकजना छोरालाई गतवर्ष ट्याक्टरको ठक्करबाट गुमाउनु परेको दुःखेसो गरेका छन् । उनीसँग अहिले २ जना छोराहरु रहेका छन भने छोरी शुष्मा मात्रै हुन्
लकडाउनको समयमा यसरी दलबलका साथ आएकाहरु विवाह गर्ने नियतले नआएको उनी बताउँछन् । छोरीको केटासँग सम्बन्ध भएको कुरा बीर बहादुरले स्विकार गरेका छन् । अस्तिको पटक भन्दा पहिले चैत १५ गते तिर केही केटाहरु आएर राति आफ्नो घरमा हमला गरेको पनि जानकारी उनले दिए । उनीहरु जाजरकोटका नभई रुकुमका केटाहरु भएको खुल्न आएको पनि उनले जानकारी दिए । अनुसन्धानपछि उनीहरु सबैलाई सम्झाएर फिर्ता गरिएको शुष्माका बुवा बीर बहादुरले दावी गरेका छन् । उनले जातीयताका कारण घटना भएको भन्ने कुरा सरासर गलत्त भएको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
तर नवराजको परिवार यी सबै कुरा मान्न तयार छैन । मृतक नवराजकी आमा उर्मिलाका अनुसार उनको छोरा र शुष्माबीच लामो समयसम्म प्रेम सम्बन्ध रहेको थियो । आमा उर्मिलाले युवतीको पेटमा आफ्नो छोराको बच्चा रहेको दावी गरेकी छन् । उनले छोरा र ति युवतीको कुरा फोनमा भएको सुनेको र त्यतीवेला युवतीले मेरो पेटमा बच्चा छ, आमा बुवाले अन्तै विवाह गरिदिन लागे लिन आउ भनेर भनेको सुनेको उनको दावी छ । उनले ति युवतीको पेटमा साँच्चै बच्चा छ भने त्यो आफुलाई चाहिने बताइन्
उनले भनिन्, ‘राति १० वजे मेरो छोरालाई फोन आएको थियो, छोराले लाउड स्पिकर अन गरेको थियो । म शौचालय जान लागेको बेलामा त्यसो भनेको सुने । साँच्चै उनको पेटमा मेरो छोराको सन्तान छ भने मलाई चाहिन्छ । छोरा वा छोरी जे भएपनि मलाई मेरो छोराको नासो चाहिन्छ ।’ उनले आफ्नो छोरा र साथीहरुको यस्तो अवस्था बनाउनेहरुलाई हदैसम्मको कारवाहीको माग गरेकी छन् ।
दोलखामा ६ दिनको सुत्केरी, नाबालक र श्रीमानको मृत्यु, परिवार र आफन्तले पोष्टमार्टम गर्न दिएनन्